Ọkụ na -enwu ọkụ ka na -enweghị nchịkwa na Turkey, Greece, Italy & Spain
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nchedo njem na Mberede » Ọkụ na -enwu ọkụ ka na -enweghị nchịkwa na Turkey, Greece, Italy & Spain
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ na -agbasa na Greece • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Safety • Akụkọ na -agbasa na Spain • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Turkey na -agbasa News
Biko kpee ekpere maka Gris bụ ozi enwetara. Ebe ezumike n'agwaetiti Kos, Rhodes na Gris, Sicily, na Southern Spain na-alụ ọgụ ịchekwa ihe nwere ike ịchekwa site n'ọkụ na-enwu ọkụ na-agbakwunye na mgbasa COVID-19 na ala ọma jijiji na mpaghara ndị ọzọ. Mgbanwe ihu igwe dị adị, nke a pụtara ugbu a site na Antalya ruo Spain.
COVID na ala ọma jijiji na -agbakwụnye ihe mberede ọkụ na -arịwanye elu
na nso nso eTurboNews kọrọ banyere wildfires na -agba ọkụ na mpaghara Antalya na Turkey.
N'ime ụbọchị ole na ole gara aga, ọkụ na -ere ọ bụghị naanị na Turkey, kamakwa ugbu a na Gris, Italy, na Spain. Nke a bụ na mgbakwunye na ala ọma jijiji na Turkey na Gris na mmụba nke ọrịa COVID-19.
Ọ bụghị ndị Kurds, dịka ụfọdụ ndị isi na Turkey chere, mana mgbanwe ihu igwe bụ ikpe mara. Nke a bụ ịdọ aka na ntị siri ike sitere na ụdị mmegbu.
A kpọpụrụ ọtụtụ narị mmadụ site na ebe ntụrụndụ osimiri na ụlọ na mpaghara na -anwa iweghachite njem nlegharị anya.
Nke a bụ ụbọchị nke isii ebe ọtụtụ narị mmadụ gbapụrụ na Gris, Italy, na Spain ebe ọtụtụ narị mmadụ gbapụrụ na ntụrụndụ na ụlọ.
Ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ n'ọkụ Turkey ruru mmadụ asatọ ka mmadụ abụọ ọzọ nwụrụ na Sọnde na Manavgat. Ọkụ n'obodo ahụ egbuolarị mmadụ ise na otu onye na Marmaris ebe a na -eme njem.
Turkey na -ata ọkụ kacha njọ n'ime opekata mpe afọ iri, ebe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ hectare 95,000 gbara ya ọkụ ruo mgbe oke ọkụ na -enwu ọkụ kpuchiri Mediterenian.
Imirikiti ọkụ 112 ma ọ bụ karịa nke gbawara na Turkey naanị n'ime ụbọchị ise gara aga ka enwere, ebe ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ gbadoro mbọ ha na Manavgat, Marmaris, na Milas.
Ndị ọchịchị Turkey na -enyocha ihe kpatara ọkụ akpọrọ ndị agha Kurdi ma ọ bụ mụnye ọkụ ụmụaka, mana ebe ọ bụ na ọkụ anaghị agbasa ugbu a na Turkey kamakwa ọtụtụ mba ndịda Europe, okwu a nwere ike metụtara mgbanwe ihu igwe.
Na Pescara, Italy, a chụpụrụ mmadụ 800 n'ụlọ ha na ebe ntụrụndụ osimiri mgbe ọkụ malitere na mpaghara okike 53-acre. Ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ mba ahụ kwuru na a kpọrọ ya ihe karịrị ihe mberede mberede 800. A gụrụ ihe mberede ọkụ 250 na 250, 130 na Puglia na Calabria, 90 na Lazip, na 70 na Campania.
Na Sicily, a kpọpụrụ mmadụ 200 n'obodo ọdụ ụgbọ mmiri nke Catania.
Na Gris, ọkụ malitere na ngwụsị izu na Patras, n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ. A chụpụrụ obodo ise na mmadụ asatọ nọ n'ụlọ ọgwụ maka nsogbu iku ume na ọkụ.
Ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ na -agbasi mbọ ike n'abalị iji gbochie ọkụ n'àgwàetiti ezumike nka nke Rhodes.
Rhodes, nke kachasị na agwaetiti Dodecanese Gris, mara maka ebe ntụrụndụ osimiri ya, mkpọmkpọ ebe oge ochie, na ihe fọdụrụ nke ndị Knights nke St. John n'oge Agha Ntụte. Obodo Rhodes nwere Old Town nke gosipụtara Street Street nke Knights na nnukwu ụlọ dị ka Obí nke Nna-ukwu. Ndị Ottoman weghaara ya na ndị Ịtali jidere ya, obí ahụ bụ ebe ngosi ihe mgbe ochie ugbu a.
Ụgbọ elu na helikọpta dara mmiri n'elu ọkụ Maritsa na Psinthos na mpaghara ugwu ebe ezigara nkwado n'ụtụtụ Mọnde.
Onye njem nleta tweeted: “Ụgbọ elu kwụsịrị ihe dị ka awa 3 gara aga ịdọpụta mmiri n'oké osimiri. N'ihi ya, echere m na ọkụ apụla. Taa, ha ji nkeji asatọ gafee ụlọ nkwari akụ anyị. Ekele dịrị ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ na ndị enyemaka niile. ”
Nkeji 5-10 niile ha na-ebu mmiri n'ihu Ụlọ nkwari akụ anyị. #rhodes #rhodos # ọkụ #ndị greecefire pic.twitter.com/TyhuaIE2jW
Onye isi obodo Bodrum kwuru, "Anyị na -ebi na hel," ọ gaghị ekwe omume ịkwụsị ọkụ sitere na ala, oge agafeela iji ụgbọ elu ọkụ ma ọ bụ helikọpta. Anyị na -agbalị ichebe ebe obibi. Mana anyị enweghị ike ime ihe ọ bụla iji chekwaa osisi.
Ọkụ na -ere ọkụ na Europe & Turkey
@selingirit na @timursoykan tweeted: “Nke a bụ mwakpo ọkụ na -atụ n'oké ọhịa, ọtụtụ ọkụ malitere n'otu oge n'otu oge, Ekele maka nnukwu mbọ ga -ejide ha mana ọ nwere ike were obere oge na mpaghara ụfọdụ, (ọ bụrụ na ha akwụsị ịkwụsị ọkụ) ugboro ugboro) Obi abụọ adịghị ya na a ga -enwetaghachi mmebi ahụ! ”
N'ebe obibi na mpụga Atens, ụlọ na -ere ọkụ, ọnọdụ n'agwaetiti ezumike Greek nke Kos & Rhodes siri ike; Tweeter ọzọ kwuru ma gbakwụnye, sị: “..Mụ onwe m nọ n'etiti oke ọkụ nke 45 centigrade, covid, na ala ọma jijiji.”
Site na Gris, otu akwụkwọ ozi na -ekwu, sị: “Gris dum na -ere ọkụ .. north Athens, Rhodes, ọkụ anaghịzi achịkwa. Biko kpee ekpere maka Gris. ”
Otu onye na -agụ akwụkwọ na Atens gbakwụnyere, sị: “N'ebe ugwu nke Atens, ọkụ ahụ bụ n'ihi mgbawa na eriri ọkụ dị elu. Enwekwara ọkụ na ndịda Peloponnesus, na Rhodes, na Kos, na n'akụkụ ndị ọzọ nke Gris n'ihi oke okpomọkụ. Kedu ka ihe si aga na Spain? ”
Ọkụ n'ọhịa na Spain gbara mkpokọta hekta 81,194 na 2019. Ndị ọchịchị ime obodo kwuru na ọkụ 10,717, nke 3,544 buru ibu karịa otu hectare. Nke a gụnyere nnukwu ọkụ ọgbụgba iri na anọ nke metụrụ ihe karịrị hekta 14 ọ bụla.